မာချူးပီချူး - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၆ ရာစု အင်ကာခံတပ်မြို့နှင့် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ
မာချူးပီချူး (Machu Picchu; စပိန်အသံထွက်: [ˈmatʃu ˈpiktʃu]) သည် ကိုလံဘီယာခေတ် မတိုင်မီ ၁၅ ရာစုနှစ်က အင်ကာတို့၏ ဒေသဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ၂၄၃၀ မီတာ (၇၉၇၀ ပေ) အမြင့်တွင် တည်ရှိသည်။ပီရူးနိုင်ငံ အူရူဘမ်ဘာ တောင်ကြား အပေါ်ရှိ တောင်တန်းတစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကူစကိုမှ အနောက်မြောက်ဘက် ၈၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၅၀ ) အကွာတွင်ဖြစ်ပြီး အူရူဘမ်ဘာ မြစ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းရာ ဒေသတွင် တည်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
၂,၄၃၀ မီတာ (၇,၉၇၀ ပေ)
၁၉၈၃ (သတ္တမအကြိမ် အစည်းအဝေး)
၁၄၅၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် အင်ကာတို့ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စပိန်လူမျိုးတို့ အင်ကာအင်ပါယာကို သိမ်းပိုက်အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ စပိန်ကိုလိုနီခေတ်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တိမ်မြုပ်နေခဲ့ရာမှ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သမိုင်းပညာရှင် ဟီရမ်ဘင်ဂမ်ကြောင့် မာချူးပီချူးကို နိုင်ငံတကာမှ သိရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မာချူးပီချူးသည် တောင်အမေရိကတွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား အကြီးမားဆုံး ဆွဲဆောင်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆောက်အအုံအများစု၏ အကြမ်းဖျင်းပုံစံကို မူလပုံစံကဲ့သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် မာချူးပီချူး၏ သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ယနေ့အချိန်ထိ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် မာချူးပီချူးကို ပီရူးသမိုင်းဝင်ဘေးမဲ့တောအဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အင်တာနက်မဲပေးမှုအရ မာချူးပီချူးကို ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဝေညာပီချူးမှ လှမ်းတွေ့ရသော မာချူးပီချူး
လူနေထိုင်ရာအပိုင်းအား မြင်ကွင်းကျယ်ပုံဖြင့် တွေ့မြင်ရစဉ်
↑ ၁.၀ ၁.၁ Nava၊ Pedro Sueldo (1976)။ A walking tour of Machupicchu။ pp. 9–10။ OCLC 2723003။
↑ Davey, Peter (October 2001). "Outrage: Rebuilding Machu Picchu, Peru". The Architectural Review.
Wikimedia Commons ရှိ Machu Picchu နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
ယူနက်စကို - မာချူးပီချူး (ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာချူးပီချူး&oldid=403389" မှ ရယူရန်
၂ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၀:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၀:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။